WHO oo shaacisay in la talaalay 4 Million balse khatarta dabaysha ay ka jirto deeganada Shabaab – Radio Daljir
Agoosto 19, 2013 1:06 b 0
Geneva, August 19, 2013 – Hay?ada howlaha caafimaadka u qaabilsan Qaramada Midoobey ee WHO ayaa shaacisay in uu sii kordhayo cudurka dabaysha ee dalka Soomaaliya, hay?adu waxay iftiimisay khatarta xanuunka ee dalka ku sii fidaysa.
War-bixin ?ka soo baxday WHO jimcihii ayaa lagu sheegay in xanuunku uu ka jiro gudaha dalka iyo deeganada xuduuda ah, waxayna tirada la hayo ku sheegtay 115 caruur ah oo la nool cudurka faafa ee dabaysha.
Horaantii bishii May ee sanadkan ilaa hadda waxaa ka socda Soomaaliya,? siinta caruurta ee dhibcanaha talaalka dabaysha, Qaramada Midoobey waxay sheegtay ilaa wakhtigaas in la talaalay 4 Million oo caruur ah.
WHO waxay sheegtay in khatarta ay ka jirto gobollada dalka oo idil, inkastoo lala tacaalayo in laga hortago, basle waxay ka digtay in xanuunku uu sii faafo isla markaasna uusan dalka ka dabar go?in taasi oo ay hortaagan yihiin sababo dhowr ah.
Qoraalka lagaga hadlay dabaysha waxaa lagu xaqiijiyey in xanuunku uu ka jiro meelaha ay gacanta ku hayaan ururka Al-shabaab, dhulkaas oo ah intooda badan meelo aysan geli karin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa hay?adaha arintan ku howlan.
Hay?ada WHO waxay ugu baaqday dowladda federaalka ah iyo maamulada dalka ka jira in ay ku dadaalaan sidii loo hubin lahaa in caruurta wadanka oo idil ay heleen talaalka dabaysha, taas oo ah jidka keli ah ee looga bad-baadi karo khatarta xanuunka.
Mudane Tarsan ?Maal-gashi kama dhici karo Xamar ilaa la helo koronto ku filan magaalada?(Dhegeyso)